Kuthetha ukuthini ukuphupha unonkala? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Iyintoni intsingiselo yokuphupha ngononkala?
2 Kuthetha ukuthini ukuphupha unonkala?
3 Intsingiselo yokuphupha unonkala esiza kuwe
4 Kuthetha ukuthini ukuphupha unonkala emanzini?
5 Kuthetha ukuthini ukuphupha ndibamba unonkala?
6 Intsingiselo yokuphupha unonkala ebaleka
7 Kuthetha ukuthini ukuphupha unonkala ofileyo?
8 Intsingiselo yokuphupha unonkala endiluma
9 Kuthetha ukuthini ukuphupha unonkala obilisiweyo?
10 Intsingiselo yokuphupha unononkala abaninzi
11 Ukuphupha unonkala kwindawo yentengiso
12 Ngaba ukuphupha unonkala kunento yokwenza necala elinothando?
Iyintoni intsingiselo yokuphupha ngononkala?
Ukuphupha unonkala kunento yokwenza nesiphithiphithi ohamba kuso kwicandelo lothando. Ukuba awutshatanga luphawu lokuba awukenzanga abantu bakuphawule okwangoku. Kodwa ukuba kubudlelwane lixesha lokuba unikele ingqalelo kuwo onke la manqaku.
Iintsingiselo ezinokubakho zeli phupha ziya kuhlala zinxulumana nobudlelwane bakho bothando. Luphawu lokuba nolungelelwaniso oluninzi ukuze ukwazi ukulusebenzisa ukuze ufumane inzuzo. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuhoya la manqaku ukuze yonke into yenze umahluko ngendlela yakho.
Ubudlelwane kufuneka bujongwe ngendlela eyahlukileyo, oko kukuthi, buqole ngakumbi. Kuyimfuneko ukuba ujonge imeko ngendlela engayi kuba lukhuphiswano phakathi kwezi zimbini, kodwa yinto ebaluleke kakhulu. Ezi ngongoma ziya kwenza umohluko kwaye zenze izinto kube lula kakhulu ukoyisa.
Ukuphupha unonkala kunokuba nentsingiselo embi, kodwa akukho nto ingunaphakade kwaye ayilo phupha eli. Into ephambili kukuzama ukuba ujonge kwaye utshintshe zonke iimeko ozinika ukuba zitshintshwe. Kuya kufuneka usebenzise la mathuba ukubonisa ukuba ukhule ngokwaneleyo ukuba ungamxabisa omnye umntu.
Intsingiselo yokuphupha unonkala esiza kuwe
Ubomi buhlala bukunika ithuba lokuzilungisa zonke ezo ndlela zokuziphatha owawukhe wanazo kwabanye. Eli lelona xesha lifanelekileyo lokusoloko izinto zibukeka ngcono. Zama ukulungisa iimpazamo zakho kwaye ngaphezulu kwako konke uqaphele ukuba ungazenzi iimpazamo naba bantu kwakhona.
Kuthetha ukuthini ukuphupha unonkala emanzini?
Ubomi bakho beemvakalelo bubangele iingxaki kubudlelwane bakho nabanye. Kuyimfuneko ukuba uqaphele onke amanqaku ukuze ufezekise ulungelelwaniso olukhulu lweemvakalelo. Ukuphupha oononkala emanzini kubonisa ukuba kufuneka ujonge ngaphakathi kuwe.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ndibamba unonkala?
Eli phupha linentsingiselo eyahluke ngokupheleleyo kwaye kuya kubaluleka ukuqhubeka ngendlela efanayo. Ulawulo lwakho lweemvakalelo lwenze ukuba abantu bakwazi ukuba secaleni kwakho, kuba unceda wonke umntu. Zama ukulandela le ndlela kwaye ngaphezulu kwayo yonke into isebenze nzima kulwazi lwakho ngokwakho phambi kwayo yonke into.
Intsingiselo yokuphupha unonkala ebaleka
Abanye abantu abasondeleyo kuwe banokungcatsha ukuthembela kwakho kwizimo zengqondo ezithandabuzekayo. Lixesha lokuba uhlalutye la manqaku kwaye kuya kubaluleka ekuguqukeni kwisimo sakho sengqondo. Into ebaluleke kakhulu kukususa loo mntu kuwe ngokusisigxina, kuba ukungcatsha kuyingozi kakhulu.
Kuthetha ukuthini ukuphupha unonkala ofileyo?
Umntu osondele kakhulu kuwe uzama ukudlula ibhola ngendlela ojongana nayo yonke into. Eli lelona xesha lifanelekileyo lokwenza umahluko ngendlela elungileyo. Ukuphupha ngononkala ofileyo kubonisa isidingo sokunikela ingqalelo ngakumbi kwizimo zabanye.
Intsingiselo yokuphupha unonkala endiluma
Ukulawula iimvakalelo zakho kwabanye yinto oyenze ngendlela elungileyo. Eli lelona xesha lifanelekileyo lokwenza umahluko kubomi babantu ngendlela elungileyo. Eli phupha libonisa isidingo sokuhlala loo mntu esoloko elawulwa kakhulu ngokunxulumene nabanye.
Kuthetha ukuthini ukuphupha unonkala obilisiweyo?
Ukuhlalutya izimo zengqondo zakho kwakhona yeyona ndlela ilungileyo yokufezekisa iinjongo zakho. Lifikile ixesha lokulwela kuphela into enokufezekiswa kwaye kubalulekile ukubamba eli thuba. Into ephambili kukuba uhlale unako ukwenza uhlalutyo oluhambelana nayo yonke into eyenzekileyo.
Ukongeza, kubalulekile ukuthathela ingqalelo iinjongo kwaye ubone ukuba kunokwenzeka ngokwenene ukuziphumeza. Xa ungathandabuzeki, soloko ukhangele into enokufezekiswa ngokulula.
Intsingiselo yokuphupha unononkala abaninzi
Iindaba ezimbi ziyeza kungekudala kwaye ukulungiselela kuhlala kusisigqibo esifanelekileyo kuwe. Ukuphupha oononkala ngezixa ezikhulu kubonisa ukuba into embi inokwenzeka ngokukhawuleza. Into ephambili kukuzama ukumamela kwaye ungalahli ithemba, kuba yonke into iya kuba ngumcimbi wexesha ngaphambi kokuba yenzeke. Into ebaluleke kakhulu kukuba ukwazi ukuzola kwaye ulinde isigaba esihle ukuba sifike.
Zama ukuqonda ukungahambi kakuhle emoyeni kwaye uyabona ukuba zivela phi ezi ndaba zimbi. Zama ukuzazi ezi ngongoma ukuze ekugqibeleni ube nethuba lokusombulula le ngxaki.
Ukuphupha unonkala kwindawo yentengiso
Eli phupha libonisa ukuba kufuneka uqhagamshelwe, kuba iindaba ezilungileyo zisaza kuza. Into ephambili kukuzama ukuqonda ukuba yonke into inokutshintshwa kwaye kuya kufuneka usoloko uwazi onke la manqaku.
Ngaba ukuphupha unonkala kunento yokwenza necala elinothando?
Akusoloko, kukho ithuba elikhulu lokuba unxulumene necala lakho lobuchwephesha ngokunjalo. Nokuba kunxulumene nothando okanye nasemsebenzini, eyona nto ibalulekileyo kukwazi yonke into eyenzekayo.